पथलैया ट्राफिकको असुलीधन्दा, कांग्रेस सांसद बानियाँको सेटिङमा भारबहन गाडीलाई फाइदै फाइदा - नेपालबहस
पथलैया ट्राफिकको असुलीधन्दा, कांग्रेस सांसद बानियाँको सेटिङमा भारबहन गाडीलाई फाइदै फाइदा
| २०:१४:३६ मा प्रकाशित
९ फागुन, बारा । प्रदेश २ को ट्राफिक प्रहरी कार्यालय पथलैयाले असुलीधन्दालाई तीव्रता दिएको खबर छ । क्षमता भन्दा बढी भारबहन बोक्ने ट्रकबाट प्रति गाडी रकम असुलेर छाड्ने गरिएको समाचार प्राप्त भएको हो । क्षमता भन्दा बढी सामान बोक्ने सवारीसाधन ट्राफिक प्रहरीको लागि घुस असुल्ने गतिलो माध्यम बनेको छ । यस्ता सवारीसाधनबाट मासिक लाखौं रूपैयाँ ट्राफिक प्रहरीले लिने गरेको समेत खुलेको छ ।
पर्साको ड्राइपोट, भन्सार र आईसीपीबाट सामानसहितका भारबहन गाडीले क्षमता भन्दा दोब्बर मात्रै नभएर अझ बढी सामान बोक्ने गरेको र उनीहरूले बारा र पर्साका ट्राफिक प्रहरीलाई मात्रै नभएर पथलैयास्थित दुई नम्बर प्रदेशका ट्राफिक प्रहरी प्रमुखको नाममा समेत मोटो रकम दिने गरेको खुलेको छ । यी ठाउँबाट निस्कने मालबाहक गाडीको क्षमता र स्वीकृति बढीमा २७ टन बोक्ने भएपनि ती गाडीले ७५ देखि ८० टन सामान बोक्दै आएका छन् । २१ टन बोक्ने क्षमता भएकाले ५० देखि ५५ टन सामान बोक्दै आएका छन् ।
यसरी क्षमता भन्दा अत्याधिक सामान बोक्ने गाडीहरूबाट ट्राफिक प्रहरीले मोटो रकम लिने गरेको छ। पथलैयास्थित प्रदेश ट्राफिक प्रहरीमा हिमालय श्रेष्ठ सरूवा भएर आएको चारदिनसम्म भने क्षमता भन्दा बढी सामान बोक्ने सवारीसाधनलाई नियन्त्रणमा लिदै कतिलाई ट्राफिक प्रहरी आफैले त कतिलाई यातायात कार्यालय पठाएर कारवाही गरिएको थियो । त्यसलगत्तै कारवाही गर्ने काम छोडियो ।
कारवाहीमा पर्ने सवारीसाधनमा बागमती प्रदेशमा नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता एवं व्यापारी इन्द्र बानियाँका समेत थिए । बानियाँ एसपी श्रेष्ठलाई भेट्न पथलैया ट्राफिक प्रहरी कार्यालय नै पुगेका थिए । त्यसपछि ट्राफिक प्रहरीले क्षमता भन्दा बढी सामान बोक्ने सवारीसाधनलाई कारवाही गर्न नै छाडिदिएको छ। भन्सारबाट आउने ट्रक, ट्रिपरले १७/१८ टनसम्म बोक्ने भनिए पनि २१/२२ टनसम्म सामान ल्याउने गरेको भेटिएको छ ।
मालवाहक सवारीसाधनको भारवहन नियमनसम्बन्धी निर्देशिका, २०७४ लागू भइसकेको छ । ट्राफिक प्रहरीले कारवाही नगरी छोडेपछि यातायात व्यवस्था बिभागले अनुगमन र कारवाही प्रक्रिया अघि बढाउने भएको छ । तौल पुल निर्माण गरेर बढी सामान बोक्ने त्यस्ता सवारीलाई जरिवाना गरेर कारबाही गर्न लागिएको हो । यातायात व्यवस्था विभागमार्फत चितवनको आँपटारी र महोत्तरीको बर्दिबासमा तौल पुल बनाइएको छ । ती पुलमा तौल जाँच गराएर मात्र मालवाहक सवारीलाई गन्तव्यतिर पठाइनेछ र यसका लागि विभागका कर्मचारी र ट्र्राफिक प्रहरी खटिनेछन् ।
एक महिनासम्म पुलमा तौल जाँच गरिने र क्षमताभन्दा बढी तौल बोक्नेलाई कम बोक्न सम्झाइबुझाई गरिनेछ, । त्यसपछि भने बढी सामान बोक्नेलाई नियमअनुसार जरिवाना गराइनेछ । त्यही अनुसार तौल पुल निर्माण गरिएको हो । सडक जति पैसा खर्च गरेर राम्रो बनाएपनि जबसम्म क्षमताभन्दा बढी सामान बोक्ने सवारी नियन्त्रण गर्न सकिँदैन, तबसम्म सडकमा पैसा खर्च गर्नु बालुवामा पानीसरह हो  ।
एउटा पुल बनाउन १ करोड ४० लाख रुपैयाँ लागेको छ । यसले सडक दुर्घटना कम गराउनेछ । सडकको आयु पनि बढाउने छ । तौल पुल बनाउन विभागमा ८/१० वर्षदेखि बजेट आए पनि कार्यान्वयन हुन सकेको थिएन  । तौल पुल चौबीसै घण्टा सञ्चालनमा आउनेछन् । पुलमा एकपटकमा ८० टनसम्म तौल जाँच्न सकिने छ  ।
ट्राफिकको व्यवहार सुधार अभियान ७ दिन पहिले
एक प्रहरी निरीक्षकसहित १८ ट्राफिक प्रहरी सम्मानित ७ दिन पहिले
ट्राफिक प्रहरीलाई घुस दिन खोज्ने चालक पक्राउ २ हप्ता पहिले
ट्राफिक जरिवाना बैंकिङ प्रणालीमार्फत लिन शुरु २ हप्ता पहिले
दैनिक दुई सय सवारीसाधनले चढ्छन् ‘फेरी’ ४ हप्ता पहिले
आँधीखोलामा दलित संघको कार्यक्रम सम्पन्न १२ घण्टा पहिले
समयमै काम नहुँदा दिनहुँ वडा धाउँछन नागरिक १४ घण्टा पहिले
शिक्षक संघ स्याङ्जाको प्रतिनिधि सभा सम्पन्न १३ घण्टा पहिले
कर्णालीका सुर्खेतबाहेक सबै जिल्ला कोरोना सङ्क्रमणमुक्त ५ दिन पहिले
स्मारिका र समारिकाले सार्वजनिक गरे प्रेमी २ दिन पहिले
गाडीमा रहेको ८ लाख सडकमै फ्याँकेर गाउँपालिकाका अध्यक्ष फरार ! ५ दिन पहिले
राष्ट्रिय भावनाले ओत प्रोत हाम्रो कालापानी सार्वजनिक ६ दिन पहिले
कांग्रेसले देशलाई सङ्कटबाट पार लगाउने : वरिष्ठ नेता पौडेल ४ दिन पहिले
खोप लगाउनेमा हामी कति नम्बरमा पर्छौं ?: चेम्बर २ हप्ता पहिले
वडा कार्यालय तोडफोड गर्नेलाई स्याङ्जा प्रहरीले किन कारवाही गरेन् ? २ हप्ता पहिले
दोलखामा नेपाल टेलिकमको फोरजी विस्तार ३ दिन पहिले
निकुञ्जका गैँडा उचित बासस्थान खोज्दै पश्चिमतर्फ ६ दिन पहिले
काभ्रेपलाञ्चोकका चार अवैधानिक ‘खानी’ बन्द २ वर्ष पहिले
मंसिर २३ गते सगरमाथाको उचाइ घोषणा गरिने ३ महिना पहिले